‘Akangasheshe ahlulelwe uMarques’ | IOL Isolezwe
‘Akangasheshe ahlulelwe uMarques’
Isolezwe / 26 July 2012, 10:36am / ZAKHELE XABA
PRETORIA, SOUTH AFRICA - JULY 21, Luvhengo Mungomeni and Siyabonga Nkosi during the Gauteng Sport Challenge match between Kaizer Chiefs and Moroka Swallows from Lucas Masterpiece Moripe Stadium on July 21, 2012 in Pretoria, South Africa Photo by Lefty Shivambu / Gallo Images
ISITOBHA seMoroka Swallows uLuvhengo Mungomeni uthi akufanele abalandeli baleli qembu baqale ukumngabaza umqeqeshi osanda kuthatha izintambo uZeca Marques ngoba kusekukhulu okuzobajabulisa kule sizini ezoqalwa.
UMungomeni, ongomunye wabadlali abebeyizethenjwa zomqeqeshi osepheka iBafana Bafana, uGordon Igesund, utshele Isolezwe ukuthi indlela engagculisi abadlale ngayo ngesikhathi behlulwa yiKaizer Chiefs kuGauteng Cup ayihlangene namaqhinga kaMarques kodwa kungamaphutha abo njengabadlali. ISwallows yahlulwa ngo 3-0 kulo mdlalo kanti uMungomeni ungomunye wabadlali abenza amaphutha aholela emagolini.
“Akufanele kuqale kukhonjwe ngeminwe umqeqeshi ngoba okwenzekile akekho owaziyo ukuthi bekungeke kwenzeke ukube bekusekhona u-Igesund. Akanikwe ithuba angehlulelwa ngomdlalo owodwa futhi owobungani osetshenziselwa ukuhlola abadlali,” kusho uMungomeni owazakhela igama esagijima kuBlack Leopards ngaphambi kokujoyina iMamelodi Sundowns.
Ngesikhathi uMarques enikwe lesi sikhundla kuSwallows eminyakeni edlule, izinto azimvumanga nokwaholela ekutheni akhonjwe indlela. Wayesizana noRodger De Sa kuBidVest Wits ngesikhathi igawulwa yizembe ngo-2005.
“Asikho isidingo sokutatazela. Nathi singabadlali sizimisele ukumdlalela uMarques njengoba besikade senza ku-Igesund futhi ngiyazi ukuthi uwabonile amaphutha enzekile kuloya mdlalo, uzozama ngakho konke ukuwalungisa. Kodwa ngiyazi ukuthi ukube iChiefs sayehlula ngabe ingcindezi ikumqeqeshi wayo manje (Stuart Baxter).”
Yize le midlalo ingeyobungani nokuhlola abadlali abahlukene kodwa kuyaziwa ukuthi abalandeli ukwehlulwa abakuthathi kalula. UMarques wamangaza abaningi eshiya ngaphandle umshayi magoli ovelele wangesizini edlule uSiyabonga “Bhele” Nomvete, waze wamfaka ngesiwombe sesibili.
NgeSonto lo mqeqeshi obeyiphini lika-Igesund uzothola ithuba lokucijisisa kahle iqembu lakhe emqhudelwaneni iMopani Cup ezobanjelwa eGiyani, eLimpopo. Lo mqhudelwano wosuku odlalwa ngamaqembu amane uzohanjelwa nayiSundowns, SuperSport United neBaobob Zero Fake.
“Abantu basazobona iqembu elifanayo nelangesizini edlule. Sizoqala ngayo iMopani ukukhombisa ukuthi alukho ushintsho abantu okufanele balulindele,” kusho uMungomeni.
IZinyoni zisayinise umdlali oyedwa kuphela, okunguFelix Obada waseNigeria obedlala kuMaritzburg United.
n Khonamanjalo akukacaci ngekusasa likaKhulekani Madondo oshaye isiteleka sakhe yedwa kuTeam of Choice. Lo mdlali sekuvele ukuthi akasazimisele ngokudlalela iMaritzburg kanti ngenxa yalokhu usenqume ukuhlala ekhaya.
UMike Makaab ongumphathi wezindaba zalo mdlali osenenkontileka yeminyaka emibili neMaritzburg izolo ukuqinisekisile ukuthi usaqhinqe ekhaya futhi usalibeka ngembaba elokuthi akasafuni ukudlalela leli qembu laseMgungundlovu.